कस्तो अवसर र समारोहमा कस्तो जुत्ता-चप्पल लगाउने त ? « Salleri Khabar
कस्तो अवसर र समारोहमा कस्तो जुत्ता-चप्पल लगाउने त ?
भनिन्छ नि हरेक मानिसको व्यक्तित्व उसले लगाएको जुत्ताबाट प्रस्ट रुपममा झल्किन्छ । जुत्ताले मानिसको हैसियत समेत बताउँछ । हामीले जुत्ता-चप्पललाई इज्जत गरेर लगायौं भने त्यसले पनि हाम्रो इज्जत बढाउँछ ।
धेरै जसो समय, मौसम र अवसर हेरेर जुत्ता-चप्पल लगाउने गर्नुपर्छ । जुत्ता-चप्पलको मामलामा महिलाहरु पुरुषभन्दा एक कदम अगाडि हुन्छन् । यहाँ हामी महिलाहरुले कस्तो अवसर र समारोहमा कस्तो जुत्ता-चप्पल लगाउने त ?
-साँझको पार्टीमा: जमघटहरुमा सामान्य फ्ल्याट तथा हल्का हिल भएको चप्पल अथवा जुत्ता लगाउनु पर्छ । यस्तो अवसरमा चौडा हिल भएको चप्पल पनि उपयुक्त हुन सक्छ । यसले खुट्टालाई आराम दिन्छ । साँझको पार्टीमा अग्लो हिल भएको जुत्ता लगाउनु हुँदैन ।अग्लो हिल भएको जुत्ता अथवा चप्पल लगाएर धेरै समयसम्म हिँडडुल गर्न गाह्रो हुन्छ ।
-रातीको पार्टी: रातीको पार्टीमा हिल कम भएको जुत्ता नै उपयुक्त हुन्छ । अझ वेज हिल भएका जुत्ता नै रातीको पार्टीका लागि उपयुक्त हुन्छ । यो हिलले खुट्टालाई पूर्ण रुपले सपोर्ट दिन्छ, रत्तिभर असहज महसुस हुन दिंदैन ।
–घुमफिर: साथी-भाइहरूसँग बाहिर घुम्न जानु भएको बेला फ्ल्याट जुत्ता लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो बेला जिन्ससँग स्पोर्ट्स सुज पनि उपयुक्त हुनसक्छ ।
-होटल : डिनरका लागि होटल गएको बेला हल्का फेसनेवल हुन मन लाग्छ । त्यस्तो बेलामा आफ्नो पहिरन अनुसारकै जुत्ता-चप्पल छनोट गर्नु पर्छ । त्यो बेला साधारण खालको पहिरन लगाइएको छ भने जुत्ता-चप्पलमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।
-विवाहको पार्टी: विवाह, व्रतबन्धजस्ता विशेष अवसरमा हाइहिल भएकै फुटवेयर प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले तपाईंको शारीरिक वनावटलाई आकर्षक देखाउँछ । आफुले लगाएको पहिरनसँग जुत्ता-चप्पल मिलेको छ कि छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ।
कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुनेहरुको सङ्ख्या १,७७०
एजेन्सी । विश्वभर सन्त्रास फैलाइरहेको कोभिड भाइरस अर्थात् कोरोना भाइरसको कारणले चीनमा फेब्रुअरी १६ सम्म
धेरै थकित र कमजोर महसुस गर्नेहरुको लागि सख्खरको प्रयोग आवश्यक !
चीनबाट नेपाल फिर्ता ल्याइएका १७५ जना क्वारेन्टाइनमा
बुहानबाट नेपाल आउने १७५ जनामा १७० विद्यार्थी, दुई बालबालिका, दुई पर्यटक र एक कामदार थिए
प्रणय दिवस: पार्टनरलाई उपहार होइन, आफ्नो बानीमार्फत् विशेष महसुस गराउनुहोस् !